အိမ်လွမ်းသူ: 04/01/2009 - 05/01/2009
Posted by အိမ်လွမ်းသူ at 4:21 AM 1 comments
ဆောင်းမေးလာတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျမပြန်ဖြေထားတာကို အခြားစာဖတ်သူများလည်း သိရှိအောင် ပိုစ့်အဖြစ်တင်ပေးလိုက်တာပါ..
ကျမရေးနေခဲ့တဲ့ပိုစ့်တွေမှာ ကျမ အခါအားလျှော်စွာ ရေးထားတာရှိပါတယ်..။ ဒီဓာတ်ပညာကို အခုမှ ဆရာမကြီးဂျာနယ်ကျော်မမလေးနဲ့ ဆရာကြီးဦးသာတင့်တို့ ရေးသားခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေ ကိုဖတ်မိပြီး စိတ်ဝင်စားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုစ့်တွေအဖြစ်မျှဝေပေးနေတာဟာလည်း ကျမတတ်သိလွန်းလို့မဟုတ်ပါဘူး..။ စာအုပ်တွေထဲက ရှာဖွေတင်ပြပေးနေခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်..။ တကယ်တမ်း ကိုယ်ဖြစ်တဲ့ရောဂါကိုတောင် ကိုယ့်ဖာသာ ပြန်ကုနိုင်သေးတာ မဟုတ်ပါဘူး..။ ကျမမှာ လက်တွေ့ကုသနေတဲ့ သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာလည်းမရှိပါဘူး။ ကျမ်းကြီး၊ ကျမ်းငယ်အသွယ်သွယ်ကို လေ့လာဖတ်ရှုခဲ့ဖူးသေးတာလည်း မဟုတ်သေးပါဘူး။ နောက်တခုက ဒီပညာတွေ၊ ဒီကုသမှုတွေဟာ မြန်မာပြည်တွင်းက ခေါ်ဝေါ်ပညတ်ထားတဲ့ ခေါ်အဝေါ်တွေနဲ့ ကုသထားတာဖြစ်လို့ ကျမတို့ နိုင်ငံခြားကအခေါ်အဝေါ်တွေနဲ့ မတူကွဲပြားတာတွေရှိသလို ဆေးဖက်ဝင်၊ မဝင်ဆိုတာတွေလည်း မသေချာပါဘူး..။ ဒီပိုစ့် တွေကို စတင်ခဲ့တဲ့အချိန်က ကျမရည်ရွယ်ချက်က ပြည်တွင်းက ဆေးဝါးလုံလောက်စွာ မရကြတဲ့ HIV (AIDS) ဝေဒနာရှင်တွေကို အစာလည်းဆေး၊ ဆေးလည်းအစာဖြစ်တာကြောင့် သူတို့အနေနဲ့ ဆေးမရခဲ့ရင် ဒီဓာတ်ပညာနဲ့ နေထိုင်စားသောက်နေနိုင်ပြီး ဒီပညာရှင်တွေကို မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှာဖွေနိုင်ကြအောင်၊ ဒီအတတ်ပညာတွေနဲ့ ရောဂါတွေပျောက်အောင် ကုသနိုင်တယ်ဆိုတာ သိစေချင်ရုံသက်သက်ပါ။ ကျမဟာဒီပညာကို အခုမှ ကကြီးရေက ကနေလေ့လာနေတဲ့ မူကြိုအဆင့်သာရှိပါသေးတယ်။ ဒီအစာဟာ ကိုယ်နဲ့သင့်တယ်၊ ဒီအစာဟာ ကိုယ်နဲ့မသင့်ဘူးဆိုတာလောက် (ကျမတင်ထားတဲ့ နေဂိုဏ်း၊ လဂိုဏ်း ဓာတ်စာ) သာ စာဖတ်သူတွေ ဖတ်ကြည့်ရင်သိနိုင်တဲ့ အဆင့်လောက်ပဲ ကျမလည်းသိတာပါ။ ဒီပညာကလည်း လေ့လာလေ၊ ခက်ခဲနက်နဲလေဖြစ်ပြီး အရင်က ကိုယ်သိတာလေးနည်းနည်းနဲ့ ဆရာလိုလိုလုပ်နေမိတာကိုလည်း ဒီနေရာကနေစာဖတ်သူတွေကို တောင်းပန်ရပါဦးမယ်..။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဒီပညာကို ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ကြသူတွေဟာ တလ၊ နှစ်လ စာအုပ်လေးဖတ်ပြီး ရေးသားပြုစုခဲ့ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆယ်နှစ်၊ အနှစ်နှစ်ဆယ် ကိုယ်တိုင် အမျိုးမျိုး လေ့လာကုသခဲ့ကြပြီးမှ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ကျမက စာအုပ်လေးတအုပ်နှစ်အုပ်ဖတ်ပြီး ဆရာလိုလိုပြန်လုပ်နေတာဟာ တကယ်တမ်း စဉ်းစားကြည့်ရင် အသွားထက်တဲ့ သံလျှက်ကို သူငယ်နှပ်စားကိုင်နေသလို ဒီဆေးကျမ်းအတွက် အလွန်အန္တရာယ်ကြီးပါတယ်။ ဆေးကျမ်းကို ပြန့်ပွားစေတာထက် ဖျက်ဆီးသလို ဖြစ်နေတာကြောင့် ကျမအနေနဲ့ မေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေအတွက် တောင်းပန်ပါတယ်..။ ကျမ အခုချိန်ထိ ဒီဓာတ်ကျမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာမှ မယ်မယ်ရရ မသိသေးပါဘူး။ ဆရာမဂျာနယ်ကျော်မမလေးရဲ့ ဆောင်းပါးတွေကိုတော့ အလျှဉ်းသင့်ရင် မျှဝေတင်ပြသွားပါမယ်..။ မေးခွန်းတွေကိုတော့ ကျမ မဖြေနိုင်တော့ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျမဟာ စာဖတ်သူသက်သက်သာဖြစ်ပြီး ဒီိပညာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာမှ မသိသေးလို့ပါ..။
ဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သေချာစွာတတ်သိခြင်းမရှိသေးဘဲ ဆေးကုသနေသူများဟာ လူသတ်သမားနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဆရာကြီးဦးသာတင့်ရဲ့ အခြေခံဓာတ်ကျမ်းမှာ ဖော်ပြထားတာကို ထပ်မံမျှဝေလိုက်ပါတယ်။
စိန်ဝိဇ္ဖာဆေးကျမ်း ကျမ်းညွှန်စံပြ ဥပဒေသမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဘုန်းသမ္ဘာရှင်၊ လုံ့လရှင်နှင့် ဉာဏ်ရှင်တို့သာ၊ ထိုက်တန်ရာသား၊ ရတနာတင်းကျမ်း၊ ဂုဏ်ပြည့်လျှမ်းသည့်၊ ဆေးကျမ်းမဟာ၊ အနဂ္ဃါဝယ်၊ ပညာနုပ်သေး၊ ဉာဏ်သရွေးနှင့်၊ မြေလေးဆန်ကုန်၊ အကြံဟုန်သည်၊ ကံနုံသူများ၊ မလိုက်စားနှင့်၊ ပတ္တမြားထိန်တောက်၊ ပြည်တန်ကျောက်နှင့် တောမျောက်ပမာ၊ ချည်းနှီးသာတည်း၊ အဇာတသတ်၊ လောကနတ်၏၊ ဓာတ်တော်ရတနာ၊ ဘေးရန်ကာသည့်၊ မဟာယန္တရား၊ စမ်းတဝါးနှင့်၊ တောသားဉာဏ်မဲ့၊ ထိကိုင်ခဲ့မူ၊ သေဟဲ့ဆိုငေါက်၊ ကြိမ်းသံဟောက်လျက်၊ ဦးစောက်ကျွမ်းပြန်၊ မွမွလန်အောင်၊ တွန်းလှန်မုချ၊ သေတွင်းကျသို့၊ ပုံပြထပ်မြှောင်၊ လားတူဆောင်လိမ့်၊ ရောင်ဖိတ်လက်လက်၊ မြမြထက်သည့်၊ စိန်သံလျှက်ဓား၊ နှစ်ဖက်သွားကို၊ နှပ်စားသူငယ်၊ ထိကိုင်တွယ်က၊ အန္တရာယ်မှု၊ ဧကန်ပြုသို့၊ ဥပမာစံ၊ သာဓကံတည်း၊ အကြံပိုးစား၊ ဉာဏ်ဝိုးဝါးနှင့်၊ အစားမလုံ၊ အကြံကုန်မှ၊ ဂဠုန်ဆားချက်၊ သမားပျက်တို့၊ လေးနက်လှစွာ၊ ဤကျမ်းစာကို၊ ပယ်ခွာသွေရှောင်၊ မသုံးဆောင်နှင့် ဉာဏ်မှောင်စောက်နက်ဖျင်းသူတို့ ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
ဘုန်းသမ္ဘာရှင်ဟု မိမိကိုယ်မိမိ မဆုံးဖြတ်နိုင်လင့်ကစား ဝီရိယရှင်၊ လုံ့လရှင်၊ ဉာဏ်ရှင်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနိုင်ပါသည်။ အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့က “ဆေးပညာကို ခေါက်မိ၊ ရမ်းမိရုံ သင်ထားမှတော်မယ်၊ အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့အခါ၊ ဆေးဆရာအလုပ်နဲ့ပဲ အသက်မွေးရမယ်” စသည်ဖြင့်ပြောလေ့ ဆိုလေ့ရှိကြသည်။ ခေါက်မိရမ်းမိရုံမျှသော ပညာဖြင့် ဆေးဆရာလုပ်မည်ဆိုလျှင် အကြံပိုးစား၊ ဉာဏ်ဝိုးဝါးနှင့်၊ အစားမလုံ၊ အကြံကုန်မှ၊ ဂဠုန်ဆားချက်၊ သမားပျက်တို့သာ ဖြစ်ကြချေမည်။ သမားပျက်ဆိုလျှင် လူသတ်သမားနှင့် ဘာများခြားပါဦးမည်နည်း။
Posted by အိမ်လွမ်းသူ at 12:06 AM4comments
ဘာလိုလိုနဲ့ သင်္ကြန်တောင်ပြီးသွားပြီ။ သင်္ကြန်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဝေဘန်ရေးပေးစရာရှိတာ ပေးဦးမှ….။
ဒီကိုရောက်ပြီးတဲ့အချိန်တွေမှာ ကျမအနေနဲ့ကတော့ သူများတွေသင်္ကြန်ပွဲဆိုလို့သာ၊ ဧပြီလမှာ သင်္ကြန်ကျတယ်ဆိုလို့သာ သင်္ကြန်လိုက်ရတာ… ကိုယ့်ဆီကသင်္ကြန်လို ခံစားချက် တစက်ကလေးမှမရဘူး။ အဓိကကတော့ အပူချိန်လေ။ ဒီမှာက ဧပြီလမှာ အအေးဓာတ်က ကုန်သေးတာမှမဟုတ်တာ။ ဂျွန်၊ ဂျူလိုင်လို လတွေမှာတော့ ဒီကအပူဟာ ကျမတို့ဆီက ဧပြီလအပူချိန်မျိုးပါ။ အမေရိကန်တွေ အဝတ်မကပ်တဲ့အချိန်ပေါ့..။ အမေရိကန်တွေမှ မဟုတ်ပါဘူး။ အပူဒဏ်ကို လူတိုင်းခံစားရတာပါပဲ…။ အဲ့ဒီအချိန်ကျမှ သင်္ကြန်ပိုးက ကျမဆီဝင်တာ..။ ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော ကျမကတော့ သမီးတွေနဲ့ သင်္ကြန်ထမင်းတွေ ချက်စား၊ မုန့်လုံးရေပေါ်တွေ လုပ်စားပြီး သားအမိသုံးယောက် ရေပက်တန်းကစားနေကြတာ။ သင်္ကြန်သီချင်းတွေလည်း ဖွင့်လို့ပေါ့..။ တနှစ်မှာ နှစ်ခါ သင်္ကြန်ကျနေတာပေါ့။
အင်း……….. ဒီနှစ် သင်္ကြန်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဝေဘန်စရာလေးတွေတော့ရှိသား..။ အပြုသဘောနဲ့ပေါ့လေ။
ဒီနှစ်သင်္ကြန်ပွဲက ထူးခြားပါတယ်။ အရင်နှစ်တွေက သင်္ကြန်ဆို ဖာသိဖာသာနေတဲ့ ကိုဝိုင်းမော်က ဒီနှစ်သင်္ကြန်လုပ်ဖို့ စတင်ဆော်သြတော့ နဲနဲတော့ထူးခြားနေတာပေါ့။ အဲဒီကတည်းက ဒီနှစ်တော့ ပွဲစည်ပြီလို့ ပြောလိုက်မိသေးတာ။
သင်္ကြန်ပွဲ လုပ်ဖို့ စတင်ပြင်ဆင်ကြတယ်ဆိုရင်ပဲ စနေ၊ တနင်္ဂနွေဆို ဦိးဂင်ကြီိးက အလုပ်ရှုပ်နေတော့တာ။ တခါတလေဆို စနေနေ့ အလုပ်ဆင်းရမဲ့ ကျမကိုတောင် အကြို၊ အပို့ မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ အားလပ်ရက်မှာ ပြင်ဆင်ကြရတာကိုး။
သီချင်းတိုက်တဲ့အချိန် နှစ်ခါလောက် လိုက်သွားဖူးတယ်။ ကလေးတွေဆိုနေကြတာ ဟုတ်နေတာပဲ… ။ တကယ့်ပွဲမှာထက်ကောင်းတယ်။ တိုက်တဲ့အချိန်မှာ စက်တွေ၊ မိုက်ကရိုဖုန်းတွေနဲ့ ဆိုတော့ တကယ်ကိုစင်ပေါ်မှာဆိုနေသလို အသံကုန်ဆိုနေကြတာ..။ ပွဲလည်းစရော… အသံတွေမရှိတော့ဘူး.. :))
ရာသီဥတုအရလည်းပါတာပေါ့…။ ဒီကရာသီက ပန်းတွေကြွေတဲ့အချိန်ဆို နှာစေး၊ ချောင်းဆိုး၊ လည်ပင်းနာတာတွေ ဖြစ်တတ်ကြတယ်လေ။ သမီိးကြီး ပေါ့အိုင်းလည်း သီချင်းတောင်ဆိုနိုင်တော့မယ် ထင်မထားဘူး။ သူကလည်း တိုက်ပြီးသားဆိုတော့ တကယ်ပွဲမှာ ဆိုချင်ရှာတယ်လေ…. ။ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးနေတဲ့ကြားက သွားဆိုနေတာ..။ ကိုယ့်မှာတော့ သီချင်းဆိုရင်း ချောင်းထဆိုးမှာ စိုးနေရတယ်။ တော်သေးတယ်.. အသံနဲနဲလုံးသွားတာကလွဲလို့.. အဆင်ပြေသွားတယ်။
အဆင်မပြေတာက ကျမပဲ..။ အောက်ကနေ ကင်မရာအသေးလေးတလုံးနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်၊ ဗွီဒီယိုရိုက်လိုက်နဲ့ တယောက်တည်း အလုပ်တွေရှုပ်နေတာလေ..။ အဲ့ဒီလောက် အလုပ်ရှုပ်နေတာတောင်မှ လိုချင်တဲ့ပုံတွေရမလာဘူး။ တခါဆို ဒီပွဲမှာ စားသောက်ဖို့ ချက်ပြုတ်ရေးတာဝန်ယူထားတဲ့ ကိုကျော်နိုင် သီချင်းဆိုတဲ့အလှည့်မှာ ကိုယ်ကတော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဗွီဒီယိုရိုက်ယူနေတာ…. သူက သီချင်းဆိုလည်းကောင်းတယ်။ ဟန်နဲ့ ပန်နဲ့ ဆိုနေတာ… အရင်နှစ်ကဆို သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက် စုံတွဲသီချင်းတောင် ဆိုဖြစ်ကြသေးတာ… ။ ကိုယ့်မှာ.. ကင်မရာကိုင်ပြီး စိတ်ရည်ရှည်နဲ့ အနီးအဝေချိန်ပြီး ဟုတ်တိ ပတ်တိ ရိုက်နေတာ… ဘေးမှာ သမီးတွေစကားလာပြောတာကိုတောင် တိတ်တိတ်နေဖို့ အသာလေး လက်ဟန်ခြေဟန် လုပ်ပြနေရသေးတယ်။ သီချင်းပြီိးလို့ လက်ခုပ်သံတွေ လဲပြီးရော ကင်မရာပိတ်လိုက်မှ RED ဆိုပြီး အနီရောင်မှိတ်တုပ်မှိတ်တုပ်က ပေါ်လာတယ်…။ သေပြီဆိုပြီး ကိုယ်နှဖူး ကိုယ်ပြန်ရိုက်မိသွားတယ်။ နောက်တော့ ကိုကျော်နိုင် သီချင်းဆိုတဲ့နေရာ ဖွင့်ကြည့်တော့ သေပြီဆိုတဲ့အသံပဲ ပါတော့တာ….း)))
လိဒ်ဂစ်တာတီးတဲ့ ကိုမိုးကျော်တို့ .. လင်မယားနှစ်ယောက် စုံတွဲသီချင်းဆိုကြတာ နှစ်ယောက်စလုံး အဆိုကောင်း၊ အသံကောင်းတွေ.. သူတို့ဆိုတဲ့အလှည့် သမီးတွေနဲ့ သူတို့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနေရတာနဲ့ ဗွီဒီယို မရိုက်လိုက်ရဘူး…။ တချို့အလှည့်တွေမှာ ဘက်ထရီအားကုန်လို့ မရိုက်လိုက်ရတာတွေလည်း ရှိသေးတယ်….
စင်ပေါ်တက်ချင်တဲ့ ပိုးကလည်း မနည်း…..
သီချင်းလည်းမဆိုတတ်၊ အကလည်း မရတဲ့ကျမ… စင်ပေါ်ဘယ်လိုမှတက်ခွင့်မရခဲ့တာ.. သံချပ်အလှည့်မှ နောက်ကလိုက်အော်ခွင့် ရတော့တာ…. သံချပ်အလှည့်လည်းရောက်ရော… ဘာမှသတိမရတော့ပဲ… ကင်မရာကို ချောင်တခုမှာ ထိုးထားခဲ့ပြီ စင်ပေါ်တက်သွားတော့တာ ဗွီဒယိုရိုက်ဖို့ တယောက်ယောက်ကို ပေးမထားခဲ့မိဘူး… တခြားလူတွေရိုက်ထားတာတော့ ရှိတာပေါ့… ကိုယ့်ထဲမှာတော့ မပါတော့ဘူး…း(
ဒီပွဲမှာ စားစရာတွေကလည်း အလျှံပယ်ပါပဲ…။ ညကတည်းက စဉ်းစားထားတာက… စားစရာတွေကို တခုခြင်းဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်ယူမယ်ပေါ့….။ စားသောက်ခန်းလည်းဖွင့်ရော… ကိုယ်ကရှေ့ဆုံးကဝင်တာပါပဲ… ကင်မရာလွယ်အိတ်တလုံးနဲ့ပေါ့…။ အခန်းထဲလည်းရောက် ရော… ပန်းကန်တခုဆွဲပြီးလူအုပ်ကြီးထဲမှာ ဟိုတိုး၊ ဒီတိုးနဲ့ စားစရာတွေတခုပြီးတခု ယူစားနေလိုက်တာ.. သမီးက တီးဝိုင်းပြန်စနေပြီဆိုပြီး လာခေါ်မှ ထတော့တာ… ။ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ လုံးဝမေ့လာခဲ့တယ်…… အစားသောက်တွေကလည်း.. အဲ့ဒီလောက်အထိ ဆွဲဆောင်နိုင်တာပါ…. သဒ္ဓါတရားတွေကောင်းကြတယ်လေ…
အင်း… တီိးတဲ့လူတွေ၊ ဆိုတဲ့လူတွေ၊ အစားအသောက်တွေ အားလုံးကောင်းကြပါတယ်…
ချို့ယွင်းတာက ကိုယ်ပါပဲ… ခေါင်းစဉ်ပေးတာတောင် မှားသွားပြီလားမသိပါဘူး…. ဝေဘန်ရေး အစား.. ဝန်ခံခြင်း ဆိုပြီးရေးရမှာ…
အော်… ဒါနဲ့.. ဒီပွဲမှာ ဦးဂင်ကြီးတယောက် တဆိတ်ဆရာလုပ်လွန်းသလားလို့… @!#$!%@&**^&%$ ဝှီး…ဝှီးးး…. ဒုတ်…. အအား.. &*^!&*^~*%#%$** !!!!!!!.. ကယ်………….. ကြ………… ပါ ………………… ဦး…….. !!%$#@*&^%#@@#$%%^!!~!!!!!!????/<*&^%$@!?@!##!@%^$$#!~#!?
Posted by အိမ်လွမ်းသူ at 11:27 PM6comments
ပေါ့လန်းရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများမှ အတာသင်္ကြန်ပွဲတွင် စုပေါင်းတင်ဆက်ခဲ့ကြသော သံချပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသံချပ်ကို ရေးသားခဲ့သူကတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီိအဖွဲ့ချုပ်ဝင် မစန်းစန်းမော်ဖြစ်ပါတယ်...။
ခေတ် စနစ်ကို အပြုသဘောမြင်
Posted by အိမ်လွမ်းသူ at 3:11 AM0comments
Posted by အိမ်လွမ်းသူ at 5:24 PM 1 comments
အော်ရီဂန်က မျိုးဆက်သစ်လေးတွေရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုလေး တွေကို ဒီနေရာ လေးမှာ ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်..... ဒီနေရာလေးမှာလဲ သမီးလေးတွေရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုကို သွားရောက်ကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ်ရှင်...
Posted by အိမ်လွမ်းသူ at 4:17 PM0comments
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၁ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့ရိုးရာသင်္ကြန်ပွဲအော်ရီဂွန်ပြည်နယ် ပေါ့လန်းမြို့တွင် ကျင်းပခဲ့တဲ့ ရိုးရာသင်္ကြန်ပွဲပါ။ ဒီပွဲကို မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဆန်စွာ သင်္ကြန်သံချပ်၊ မြန်မာ့သမီးပျိုလေးများ ရဲ့ယိမ်းအက၊ သင်္ကြန်သီချင်းများ၊ ခေတ်ပေါ်တေးဂီတ စသည့်ဖြင့်တင်ဆက်သွားးကြပါတယ်။ လာရောက်အားပေး သူမြန်မာနိုင်ငံသားများ၊ မိတ်ဆွေအမေရိကန်များနှင့် အသီးသီးသောပရိသတ်များအား မြန်မာ့ရိုးရာအစားအစာ မျိုးစုံလင်စွာဖြင့် တည့်ခင်းဧည်ခံခဲ့ကြသလို မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနဲ့အညီ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲကိုလဲ ကျင်းပ ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်...
မြနန္ဒာသီချင်းနှင့် ပရိတ်သတ်အားလုံး ပျော်ရွှင်စွာ အဆုံးသတ်ကြကာ ပြီးဆုံးသွားပါတယ်.. အစားအသောက်များစုံလင်လှပေမဲ့ ဧည့်သည်များကို ဧည့်ခံရင်း ဓာတ်ပုံမရိုက်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက် မတင်ပြနိုင်သလို သံချပ်ကိုလည်း မိမိကိုယ်တိုင် ဝင်ရောက်ကူညီ သီဆိုနေသောကြောင့် ဓာတ်ပုံရော ဗွီဒီယိုပါ မရိုက်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက် ပြောထားသည့်အတိုင်း မတင်ပြနိုင်သည်ကိုလည်း တောင်းပန်ပါတယ်ရှင့်........
Posted by အိမ်လွမ်းသူ at 12:34 AM0comments
သင်္ကြန်မှာ ရိုးရာမပျက်စေဖို့ သမီးတွေက ဆိုကြ၊ ကကြ … အဖေက တီးလိုက်ဆိုလိုက်နဲ့ သံချပ်သံတွေက ဆူညံညံနဲ့ တိုက်နေလိုက်ကြတာ ဒီနေ့နောက်ဆုံးပဲလေ… မနက်ဖြန်ဆို ပွဲကစပြီလေ… အဲ့ဒီိအခါမှပဲ တဝကြီး သွားကြည့်ရမှာပဲ… အကြွေးအမွေးကလဲ စုံစုံလင်လင်နဲ့ ကောင်းတယ်ဆိုပဲ… မနက်ဖြန်ကြရင်တော့ စားစရာအစုံနဲ့ ယိမ်းအကတွေရော အဆိုတွေကိုပါ စုံစုံလင်လင်မျှဝေပါ့မယ်… ဒီနေ့တော့ သီချင်းတွေ၊ သံချပ်တွေတိုက်နေတာကို ဓာတ်ပုံရိုက်လာလို့ အမြည်းလေးတင်ပေးထားပါတယ်… ပိုစ့်မတင်ဖြစ်တာကြာသွားတဲ့အတွက် အခုမှပဲ မိတ်ဆွေအားလုံးကို တောင်းပန်လိုက်ရပါတယ်ရှင်……
အော်.... အခုပိုစ့်တင်နေတဲ့အချိန်က မနက်၂ နာရီကျော်ပြီဆိုတော့ ပွဲစမှာဒီနေ့ပဲပေါ့နော်...
Posted by အိမ်လွမ်းသူ at 2:12 AM 1 comments